Swedishka oo noqday dadka ugu soo galootiga jecel guud ahaan qaarada Yurub | Somaliska
Swedishka oo noqday dadka ugu soo galootiga jecel guud ahaan qaarada Yurub
Afti ururin laga qaaday shacabka ku nool wamada Midowga Yurub ayaa lagu soo bandhigay in shacabka Sweden ay yihiin kuwo aragtida wanaagsan ka qaba soo galootiga. 72% shacabka Sweden ayaa muujiyay in ay aragti aad u fiican ka haystaan soo galootiga ka imaanaya wadamada ka baxsan qaarada Yurub.
Swedishka ayaa u muuqda in ay yihiin kuwo si qaas ah uga diwan shacabka kale ee Yurub, iyadoo wadamada kale ee ugu dhow aragtidaan ay yihiin wadamada Croatia iyo Spain oo shacabkooda 48% ay muujiyeen in ay soo galootiga aragti fiican ka haystaan.
Isku celcelis shacabka Yurub ayaa muujiyay in 57% ay ka soo horjeedaan soo galootiga. Aragtida guud ee shacabka Yurub ayaa u muuqata mid ka soo horjeeda soo galootiga balse Swedishka ayaa iyagu ah kuwo fikrad kale ka haysta. Sababta ka dambaysa aragtida wanaagsan ee Swedishku ka haystaan soo galootiga ayaa waxaa sharaxday Marie Demker oo siyaasada ka dhigta Jaamacada Göteborg.
“Waxaan la qabsanay soo galooti fara badan, waxaana aragtay faa’iidada ay leeyihiin. Qaxootigu marnaba ma noqon arin weyn oo dood ka abuurta siyaasada Sweden” ayay u sheegtay wakaalada TT.
Shacabka wadanka Latvia ayaa noqday kuwa ugu soo galootiga neceb guud ahaan qaarada Yurub. Iyadoo 16% oo keliya ay muujiyeen aragti fiican oo ku aadan soo galootiga.
Hadaba su’aashu ayaa ah in la aamini karo aftidaan maadaama sanadihii dambe ay Sweden ku soo bateen cunsuriyiinta isla markaana dooda ku aadan soo galootiga ay cirka isku shareertay. Haddii ay saxtahay aftidaan ayay tahay arin dhiiri gelin leh balse waxaan ka cabsi qabaa in Swedishku aysan xaqiiqada ka sheegin fikradooda iyadoo ay dhacdo in Swedish badan ay fikrad wanaagsan muujiyaan marka wax laga waydiiyo soo galootiga, si ay uga fogaadaan in lagu tilmaamo cunsuri balse qalbiga ay uga jidho fikrad kale. Sidee u aragtaa adigu?
Ma runbaa in dadka Somalia u safra Arlanda lagu joojinayo?
Dowlada Sweden oo lagu haysto warshad hubka oo ay u dhiseen Sacuudiga
Mudaharaad ka dhacay magaalada Uddevalla [Sawirada]
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk intasna bufiska qosolkisa cml …… walal Jimcale 2 sano maxa war ah ayaa ka haaysaa jawaab thanks walal
January 18, 2015 at 13:23
Kkkkk 2da sano buufis muukeenay?
Hooyo soomaaliyeed says:
January 18, 2015 at 14:56
Asc, Aniga waxay ilatahay inaysan dadka Swedishku runka ka sheegin aragtidooda kusaabsan soogalootiga, iyo sida ay u,arkaan marka aytimaado fikrad ururrin. waayo qiyaasta korkuxusani maahan tan saxda ah. Marka labarbardhigo sida ay dalka gudihiisa ajinabiga uladhaqmaan,ama hadaadfiiriso sida cunsuriyado ay waadan dambe usoobadaneeysay. marka waxaan qabaa wey labowejiileeyaan, oo runta kamasheegaan aragtidooda.
Asc walaalayaal ayaan taaan Cid kahad laysa 2da sono
Waan la nahay
January 18, 2015 at 15:30
Aniga waxan maleynayaa in cunsuriyadu ku soo badatay sweden maxa yeelay web samaliska maalin dhow waxaan ka aqriyay in sanadkii tegay soomalida kaligeed dalkan soo gashay 4363 kuwaas oo 1025 la aqbalay inti kalena la diiday aniga kuwa la diiday ayaan ka mid ahay.saas owgeed ma filaayo in waddamada yurub laga jecel yahay soo galootiga siiba kuwa muslimka ah WBT
January 18, 2015 at 20:16
asc aniga waxay ila tahay in bulsho neceb diintayda iyo nabigayga NNK aanan anigu kasugayn inay i jeclaadaan, waayo waxaan aaminsanahay waa cadowga alle subxaanu watacaalaa iyo cadowgayga marka waxaan leeyahay aan edeb iyo akhlaaq kula noolaano oo aan unaxariisano qofkii namuta si ay diinta islaamka ugu soo hanuunaan waayo mafiicna in markasta sawirxun laga bixiyo diinteena qofkasta yuu ku xisaab tamin in uu gaal ku jeclaado laakiin diinteena ayaa ina faraysa in dhaqan wanaagsan nalookaga daydo.. waxaan kaloorabaa inaan gabdhaha wallaalahay ah u sheego oo soomaaliyeed inay hadalkooda hoos udhigaan markay daaraha hoostooda marayaan iyo marka basaska iyo tareemada laraacayo walaalayaal aan alle ka baqno umadaha uu abuurtayna aan ka xishoono illaahay towfiiqda hanootoosiyo aaamiin wcs.
Waxa ku jar cunsoriyiinta.kuwaas oomarkastaba.soogaloodiga.sheego.dhaliilahoda. Mida.kale.isdhaxgalkane,doorkiisa,ayoow,leeyahay,waayoo,waxa,yar,qof,iswedhish,ah,oolashaqeeyo,qof,soogalooti,ah,,tusaale,waxad,fiirisaa,meesha,aadagantahay,meeqa,soogalooti,ah,ayaa,shaqeeyso,kuwa,shaqeeyaa,saaxiib,shaqo,,ooeey,lasheekeestaan,maleeyihiin,,kuwashaqeeyo,waxa lagayaabaa,ina,eey,islashaqeeyaan,4sano,masne,waligood,waxshaqada,kabaxsan,kama,sheekeeysan,,,mida,ugudabeeyso,shacabka,isweedhan,weefiican,yihiin,intooda,badan, taasine,waa,doorka, eey,ugubadan,yihiin,ina,eey,jaclaadaan,soogalootiga,,waayo,dadka,waxa,eey,isnecbaadaan,markii,wax,dheef,leeskugudaro,,ama,shaqo,,dhib,badan,eey,kadhaxeeyso,dhibkaasne,leesla,qeebsan,